Wayephindwa kabini ebizwa ngokuba ngowona wesifazane obalaseleyo emhlabeni. Umculi omkhulu kunye nomdlali ongekho ngaphantsi. Umfazi oshishino ophumelelayo. Iingubo, iingxowa, iziqholo - ngenxa yezinto ezingenakuyithatha uJennifer Lopez, zonke ziyaziwayo kwaye zifuna zonke ihlabathi, kuba lo mfazi uyakwazi ukwenza umxholo wonke ngaphandle kwento!
UJennifer Lopez: impumelelo kuyo yonke imiba kunye nemisebenzi
Xa ebuzwa ukuba imfihlelo yempumelelo yakhe ifihliwe kule ngxaki, uJay Lo uphendula: kubalulekile ukuba uhlale usebenza kulokho uthandayo. Kungenxa yesi sizathu sokuba enze iifilimu, amarekhodi angabonakaliyo, enze iziqholo kunye nokwakha izambatho zakhe. Izinto ezinqabileyo kunye nezinto ezincinci ezingaphantsi kwe-Jay Lu kuqala zavela kwihlabathi lefashoni ngo-2001 kwaye loo nangoko yaba yintando kwaye yafunwa phakathi kwefesistiya yehlabathi lonke. Izambatho ezivela eLolez ziquka imfashini kunye neengubo eziqhakazileyo, ezenziwa nguJennifer ngaloo minyaka edeleyo xa wayehlala kwelinye kwikota elona lihlupheke kakhulu kwiBronx, kwaye iphupha lozuko kunye nokuthandwa kwehlabathi kwakunokuba yintombazana. I-Lopez ngokwakhe ayinamahloni ngethuba lakhe elidlulileyo, okanye ngeengcambu zakhe zaseLatin America. Ukholelwa ngokunyanisekileyo ukuba xa abantu bebathanda ama-freaks, baya kuthanda iimpahla zakhe kunye namafutha! Ngoko kukwazi! Kwiminyaka embalwa nje yobomi, inzuzo yenkampani yakwazi ukufikelela kuma-dollar ayi-400 yezigidi.
Emva kokuqala kweD.n. Iingubo zenze i-furore enkulu, ngegama elipheleleyo, ngeli xesha kunye neempawu ezininzi ezaziyaziwayo ziphendukela kuJennifer ngesiphakamiso sokukhulula isiphunga sazo. Kwaye ngenxa yoko, njengeLopez iqabane eliphuma iqela leqela elithandwayo lezonyango "Cat-Lancaster". Ukulandela isicwangciso, isiqhumiso esitsha kufuneka sikhombise ngokupheleleyo indlela yokuphila yodumo. Lo ngumfazi ophumelelayo, wamanje kunye nozimeleyo, ngelixa ulwabelana ngesondo kunye nemvelo. UJennifer ngokwakhe uthatha inxaxheba ngokuthe ngqo kunye nentshukumo kwinkqubo yokudala imimoya kuphela, kodwa iipakheji, kunye nokukhangisa iziqephu, imifanekiso. Njengoko intloko yesichengiso sokuthengisa iLancaster, uCatherine Welch, yathi: "UJennifer, njengomnye umntu, unomqondo omkhulu wefashoni, iziqholo kunye neendapu!" Iipapu zaphendula ngokuthobeka ukuba, ngokuqinisekileyo, akakwazi ukwenza ngokupheleleyo, kodwa ngokubhekiselele kwisisombululo sokugqibela kunye nembono ngokwayo, oku kuchanekile. Isiqubulo sokuba inkwenkwezi ifakwe kumgca weeqholo zayo zifundeka: "Ukuba igama lam lilapha okanye loo mveliso, ndifuna ukuba iphelele. Into ebaluleke kakhulu, ngokungathandabuzeki, ndandiyithanda! ".
UJennifer Lo wagqiba kwelokuba isiphumo sakhe sokuqala sifanele sibe sisandul 'ukutshatyalaliswa, sinobudoda kunye nexesha elifanayo. Yiyo le mpawu eyayikwazi ukudibanisa iphunga lokuqala elivela eLolez elibizwa ngokuthi "Glow". Amanqaku e-vanilla kunye needrapefruit zahlanganiswa ngokufanelekileyo. Le ngqungquthela inokunika ubungqina obungenakuqhathaniswa bokuhlaziywa, njengokungathi uvele uvela emoyeni kwaye uzive uvuyayo kwihlabathi lonke! Ekuboneni kokuqala, "Glow" kulula kakhulu kwaye inomtsalane, kwaye inokuchazwa ngamagama amathathu, okuya kuba: "ukutsha, ubumsulwa kunye nesondo." Ngokuba uJennifer Lopez yinto enobungqina bokuba ingqungquthela yayingekho ngokwayo, kodwa ibonakalisa inxalenye yombhali wayo, njengoko yayixutywe kunye nenkohlakalo yesikhumba kwaye igxininisa umntu ngamnye. Njengoko inkwenkwezi yacinga ngayo, iqala ukuqala umgca wayo omtsha wee-perfumes. Le yindlela yokuqhumisa ngokwayo eyazalwa ngayo, kunye nefayili yebhotile kunye nomfanekiso wokukhangisa okhuphayo: umlambo wamanzi kwisikhumba esivuthayo. Igama lafika ngokwalo. U-Glou - oku kukukhanya kunye nokunyamezela, ukuphefumlelwa kwangaphakathi kunye nentlawulo yamandla azalwayo kwaye ahlala kuyo ngamnye wethu. Ngokuqinisekileyo, umntu unokubala imimoya evela kwiDL. Into eqaqambileyo kwaye iyatshitshisa kakhulu, eneneni, ayikho into enjalo. I-SamolaLopez ikholelwa ukuba ubulili kunye nobuhle kufuneka buvela kwi-nutria, kungenxa yesi sizathu sokuba sisondele kakhulu kumfanekiso othi "Ukukhanya" kunokudala, ngokuthelekiswa nento enokuthi ibonwe ngezinye ikhempyutheni. Iqhumiso layo lingumngqamaniso we-movie okanye enye i-albhamu yomculo. Oku kuninzi ngokuzimeleyo. Ukusuka kubo kuvela ubunqunu kunye nokuyingqayizivele!
Le phunga alikho nto ngaphandle kokuqhubeka kwengcamango ephambili ye "Glow." Njengoko inkwenkwezi yathi: "Yonke into eyenzayo ivela kumphefumlo, yingakho izibonda zitshintsha kunye nomdali wazo." I-Glau "inokufaniswa nentombazana encinane kunye namava. "I-Miami Glow" imele umfanekiso omtsha wentombazana eye yakhula encinci kwaye iyenze ingqiqo. " Yiyo kanye indlela abadalwa ngayo imimoya yokupapashwa. Lopezpozhelala uyamangalisa wonke umntu kwaye wancenga ukuba wongeze kule manqaku enqabileyo ye-whiskey, isiphunga se-alcoholic liquor, esithumela yonke imimoya engenakukhathazeka kwe-Miami.
I-flavour yesithathu, eyamncedisa uJennifer ukuba enze i-lancaster "kwiLancaster" ibizwa ngokuba "kunjalo". Apha, umntu akanakukugqithisa ukubaluleka kwalolu qhumiso, kuba lujoliswe kubhinqa abanamandla, abathandekayo nabasetyhini. "Ukuba udibana naye kwisitrato okanye kwenye indawo," uLopez uthi, "ngokuqinisekileyo awukwazi ukuliphosa, qaphela, kuba le phunga liyinto ekhethekileyo neyodwa. Yiyo kanye into endiyifunayo! ". Umfanekiso othi "Njalo" ngumfazi omhle, oqinileyo kwaye ophumelelayo, ohlala esenza into ebalulekileyo kwaye akayi kulahlekelwa ngumkhwa wendalo kunye nesondo. Ndiyavuma, akuyikukhumbuza umlobi weqhumiso?
Ngeli qhumiso, uJay Loporadova wabo bonke abalandeli bakhe ekuwa kwe-2005, ngokukhawuleza bamkhulula nge-albhamu yakhe entsha ebizwa ngokuthi "Ukuzalwa kwakhona." Bobabini, kunye nomnye waba ubungqina obungenakunqandeka bokungcoliswa kweenkwenkwezi. Kulo livumba, uLolz wayefuna ukuthetha ngokunyanisekileyo nangokwenene-ngomdaniso. UJennifer waqala ukudansa eneminyaka emihlanu. Emva koko, ngokufihlakeleyo kubazali bakhe, waya kwisikolo somdaniso - babemelene nomsebenzi wentombazana, kwaye babefuna ukumbona njengegosa. Kodwa ikamva lekamva alizange liyeke ephupha lakhe! Namhlanje, xa ihlabathi lonke liwela ezinyaweni zakhe, wanquma ukuxelela wonke umntu oko wayevakalelwa ngexesha lomdaniso. Ngoko kwakukho imbono yesinambithe sesine se-D. Lo. Ekuqaleni, uLopez wayefuna ukumnika igama elithi "Dancing", kodwa ngokukhawuleza watshintsha ingqondo yakhe, egxeka ukuba imimoya kufuneka ixelele kuphela ngokunyuka, kodwa kunye nokuthanda, isigqi, ubomi. Yonke into enceda ukukhupha iimvakalelo. "UKUPHILA" kudibanisa iphunga lesithelo seentyatyambo. Udlala ukudlala, kwaye ubaluleke kakhulu ngexesha elifanayo. Ngaloo phunga, onke amabhinqa angakwazi ukuzivakalela kwaye akhululekile!
Ngaphakathi okanye iphupha lizaliseka!
Ngoku, ngaphezu kweengqungquthela, i-JayLo ibandakanyeka ekuveliseni umgca weziselo zokuhlobisa. Kwaye kumbuzo othi unomdla kakhulu kuyo yonke into-ukudlala kwi-cinema, ukucula, ukudansa, okanye ukuqulunqa imimoya emitsha, ngokuqinisekileyo uyaphendula: "Akukho nto inomdla kunokuba uphumelele iphupha lakho ebomini! Ngaloo ndlela uziva uvuyayo umntu, rhoqo ekuseni uvula amehlo akho! "
Yiyiphi into enhle yokukhetha?
UTatyana Navka ulungiselela umtshato eSochi
Ingxaki yesikhumba, i-acne, i-acne: indlela yokuphatha ngayo
I-Casserole kunye ne-pasta, inyama enqabileyo kunye noshizi
Ukupheka okumnandi kwiindawo ezizodwa zokutya
Isaladi yesitshalo seqanda kunye namaqanda
Utshintsho oluthambo lwabafazi ababethe izicathulo eziphezulu